Hebei XiongYe Machine Trade Co., Ltd dia naorina tamin'ny 1998, izy dia sampana iray an'ny orinasa Hebei XiongYe Group. Hebei XiongYe Group dia ahitana orinasa xinji City changxing foam machine, orinasa Hebei XiongYe Machine Trade Co., Ltd, Hebei Nuohang Technology Co., Ltd.
Ny orinasanay dia hanomboka ny dingana faharoa amin'ny paikadim-pampandrosoana. Ny orinasanay dia mihevitra ny "vidiny mirary, ny fotoana famokarana mahomby ary ny serivisy aorinan'ny varotra tsara" ho toy ny foto-kevitray. Manantena izahay fa hiara-hiasa amin'ny mpanjifa bebe kokoa ho an'ny fampandrosoana sy tombontsoa. Miarahaba antsika mpividy mety hifandray aminay izahay.
Izahay dia vondrona orinasa izay mamokatra milina fanaovana foam, famonosana foam, haingon-trano amin'ny foam, floats trondro, asa tanana taratasy, haingon-Krismasy ary akora. Hatramin'ny niorenan'ny orinasa dia nifikitra tamin'ny "fitrandrahana, fahamendrehana, fanavaozana ary matihanina" izahay ho fototra ary ilain'ny mpanjifa ho fiandohana. Nanolo-tena hanangana ny marika "CHX".
Ny orinasanay dia mampiasa mpiasa mihoatra ny 300, amin'ny alàlan'ny ezaky ny mpiasa iray manontolo, ny fahafaha-mamokatra isan-taona dia fonosana 10 tapitrisa sy milina EPS miisa 1200. Mifantoka amin'ny fanofanana talenta, fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny sekoly sy ny orinasa ny orinasanay, fototra iorenanay amin'ny oniversite izahay Mpianatra sy vondrona iray ao amin'ny Chambre de Commerce Hebei ho an'ny Import sy Export.Currentes ny machine machine sy foam fonosana dia efa aondrana any Amerika, France, Australia, Italia ary firenena sy faritra 20 hafa.
Nahatratra ISO14001 mari-pahaizana momba ny fitantanana tontolo iainana, mpikambana ao amin'ny efitrano plastika vita amin'ny plastika Hebei foama, mari-pahaizana CE, mari-pahaizana ROHS, mari-pahaizana TUV Alemanina.
Niara-niasa tamin'i Tonga Walmart sy China Civil Engineering Group Co., Ltd.
Ny orinasanay miorina eo akaikin'ny Shijiazhuang, Tianjin, Qingdao, mankafy ny ranomasina, lalamby, fitaterana an'habakabaka mety izahay.